လူကြီးများအတွက် LEGO Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
လူကြီးများအတွက် LEGO Black Friday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်
အဆိုပါ Lego Group သည် 2021 ခုနှစ်တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ စျေးကွက်ကို ကြီးမားသောနည်းလမ်းဖြင့် လိုက်သွားသည် - သို့သော် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ တန်းတူညီတူ ကြီးမားသည်ဟု မဆိုလိုပါ Black ကသောကြာနေ့ ၎င်း၏အပေါ်အပေးအယူ Lego Creator Expert အစုံ?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် / LEGO နောက်ဆုံးထွက် LEGO Creator Expert အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား - ယခု£ 79.99, £ 55.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10289 ပရဒိသု၏ငှက် - ယခု£ 89.99, £ 62.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10289 ပရဒိသု၏ငှက် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
10295 Porsche 911 - ပေါင် ၈၉.၉၉၊ ယခု£ ၆၉.၉၉ ဖြစ်သည်
10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား - ယခု£ 109.99, £ 89.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274 - ယခု£ 179.99, £ 129.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDBS မှာ - ယခု£ 129.99, £ 109.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
ပန်းစည်း 10280 – £44.99 ဖြစ်ပါတယ်။ယခု £34.99
10281 Bonsai သစ်ပင် - ယခု£ 44.99, £ 34.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား - ယခု£ 79.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274 - သည် A$299.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$279.99 ဖြစ်သည်။
10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား - သည် A$199.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$159.99 ဖြစ်သည်။
10295 Porsche 911 - သည် A$229.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$189.99 ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးထွက်သမျှကို ခြေရာခံပါ။ Lego Creator Expert / လူကြီးများအတွက် Lego ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်မွမ်းမံပြင်ဆင်ပေးမည့် ဤစာမျက်နှာရှိ စျေးနှုန်းများ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
Brick Fanatics စာဖတ်သူများသည် အငြိမ်းစားယူခြင်းအတွက် သီးသန့်လျှော့စျေးကို လောလောဆယ် ရနိုင်သည်။ Creator Expert ကားမှတဆင့် Zavvi:
UK- £15 သက်သာသည်။ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ at Zavvi ကုဒ်နှင့်အတူ BRICKASTON
US- တွင် $10 ချွေတာလိုက်ပါ။ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ at Zavvi ကုဒ်နှင့်အတူ BFASTON
ဩစတေးလျ- A$20 သက်သာသည်။ 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ at Zavvi ကုဒ်နှင့်အတူ BONFANATICS
လူကြီးများအတွက် LEGO / LEGO Creator Expert အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
ယခင်ကအဖြစ်လူသိများသည့်ဆောင်ပုဒ် Creator Expert ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်နာမည်ပြောင်းခဲ့သည် လူကြီးများအတွက် Lego ('၁၈+' ဟုသာလူသိများသောစာလုံးအတိုကို လိုက်၍ ၎င်း၏အနက်ရောင်သေတ္တာများပေါ်တွင်အသက်အမှတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်) ထို့ပြင်စျေးကွက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်လိုင်းများ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပျံ့နှံ့မှု၊ တည်ဆောက်နိုင်သောအပင်များ၊ ဘောလုံးကွင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုပွေ့ပိုက်ထားသည်။
အဲဒီရာထူးတွေ လူကြီးများအတွက် Lego အဆိုပါတစ်ဦးအဖြစ် Lego အဖွဲ့၏ စွယ်စုံရဆုံးနှင့် ကွဲပြားသည့် အပြင်အဆင်များ ကြောင့် ၎င်းကို ကြည့်ရှုရန် တစ်ခုတည်း ဖြစ်စေသည်။ Black ကသောကြာနေ့. အမှန်စင်စစ်၊ အချို့သောအကောင်းဆုံးများ Lego လူကြီးများအတွက်အစုံအပါအ ၀ င်ရောနှောပါဝင်နိုင်ပါသည် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ် နှင့် ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274.
မကြာသေးမီက showstoppers များပင်လျှင်ကြိုက်သည် 10278 ရဲစခန်း နှင့် ၁၀၂၇၆ Colosseum လျှော့စျေးများကိုမကြည့်ပါ၊ သူတို့သည်ယခုနှစ်လက်ဆောင် ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Lego Creator Expert modular အဆောက်အ ဦး များ Black Friday အပေးအယူများ
၏လက်ရှိလိုင်း -Up Lego Creator Expert modular အဆောက်အ ဦး များပါဝင်သည် 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10270 စာအုပ်ဆိုင် နှင့် 10278 ရဲစခန်းမရ။ အဲဒီအထဲက၊ 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် 2021 နှစ်ကုန်တွင် အနားယူမည်ဟု သတင်းထွက်နေသည်။ Black ကသောကြာနေ့ အဲဒါကို ကောက်ယူဖို့ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။
အငြိမ်းစားယူထားသော အစုံအလင်သည် ယခင်ကာလများတစ်လျှောက် ရက်ရက်ရောရော လျှော့စျေးများကို နှစ်သက်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ စျေးဝယ်ပွဲများ, ထို့ကြောင့်အပေးအယူများအပေါ်ထွက်ရှာပါ။ 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် at LEGO.com ဒီနှစ်။
LEGO ဆောင်းရာသီကျေးရွာ Black Friday အပေးအယူများ
10267 Gingerbread အိမ် -လက်ရှိရနိုင်သောရှေးအကျဆုံး Lego Winter Village Collection set - ဤနှစ်တွင်အငြိမ်းစားယူလိမ့်မည် 10275 Elf ကလပ်အိမ် နှင့် 10293 ခုနှစ်တွင် 2022 Santa ၏လည်ပတ်မှု။ အကယ်၍ သင်သည် အံ့ဖွယ်ကောင်းသော (နှင့် အံ့သြဖွယ်) သတ်မှတ်ချက်များကို ဖမ်းဆုပ်လိုပါက၊ ၎င်းကို သင့်စျေးဝယ်စာရင်းတွင် ထည့်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့: ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် လက်ဆောင်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီအောင် ကူညီပေးရုံသာမက တံခါးအပြင်သို့ ထွက်သည့်အခါတွင်ပင် ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ပွဲလမ်းသဘင်၌ တစ်ကြိမ်တည်း ဖြစ်သောကြောင့် တည်ဆောက်ရန် အချိန်မီ ဖြစ်ပေါ်လာသင့်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ လမ်းက မထွက်တော့ဘူး ခရစ္စမတ်လည်း ရောက်တော့မယ်...
Lego Creator Expert Black Friday ကားများအရောင်းအဝယ်
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်၎င်းအားပန်းခြံမှ၎င်းနှင့်အတူအမြဲတစေခေါက်သည် Lego လူကြီးများအတွက်ကားများနှင့်၎င်း၏အကောင်းဆုံးသုံးခု Creator Expert မော်တော်ကားများသည် 2021 ခုနှစ်တွင် အနားယူတော့မည် - ယင်းသည် ၎င်းတို့အတွက် အဓိက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဖြစ်လာစေသည်။ Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူ။ အရ Brick Fanatics'ရင်းမြစ်များ' 10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား, 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ နှင့် 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy အားလုံး dep ပါလိမ့်မယ်art နှစ်ကုန်တွင်စင်ပေါ်တက်သည်၊ ထို့ကြောင့်နိုဝင်ဘာလတွင်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်လျှော့စျေးများကိုအားလုံးမြင်နိုင်သည်။
လူကြီးများအတွက် LEGO / LEGO Creator Expert အငြိမ်းစားယူခြင်း Black Friday သဘောတူညီချက်များ
modular အဆောက်အ ဦး တစ်ခု၊ Winter Village set နှင့်မော်တော်ယာဉ်သုံးစီး၊ ၁၀၂၆၁ Roller Coaster နှင့် 10277 မိကျောင်းစက်ခေါင်း ၎င်းမှအနားယူရန်လည်းရှိသည် Lego Creator Expert ဒီနှစ်မှာအကွာအဝေး ယခင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ စင်ပေါ်တင်ခဲ့ပြီး၎င်းထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့၏အထင်ရှားဆုံး Fairground Collection အစုံသည် ၂၀၂၀ တွင်သာစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုသက်တမ်းအတိုဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာသည် Lego Creator Expert ရက်စွဲအစုံ။
နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းသောသက်တမ်းသည်၎င်းအားစျေးကွက်အ ၀ င်အငြိမ်းစားပြီးနောက်စျေးနှုန်း၌ကောင်းစွာတက်နိုင်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အပေးအယူကိုမဆိုဂရုပြုပါ။ 10277 မိကျောင်းစက်ခေါင်း သင့်မှာအသားအရည်တစ်ခုခုရှိရင် Lego ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဂိမ်း။
နောက်ဆုံးထွက် အားလုံးကို ထည့်ပါမယ်။ Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူ Lego Creator Expert ကြေငြာသည့်အခါဤစာမျက်နှာကိုသတ်မှတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးလျှော့စျေးအားလုံးကိုပုံမှန်ပြန်စစ်ပါ။ စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် Lego Black ကသောကြာနေ့ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် အပေးအယူများ၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.